> Resource> iCloud> Olee mbupụ iCloud Ndi ana-akpo ka Outlook
Ya mere, ị nwere ụyọkọ kọntaktị echekwara na iCloud, ma ugbu a ị na-amasị mbupụ ha gị Outlook? Ọtụtụ mgbe, i nwere ike na-gwara mbupụ iCloud kọntaktị na a vCard faịlụ, na mgbe mbubata ka Outlook.It bụ otú na-ewe oge. Ugbu a, ị na-adịghị mkpa na-eme na ihe ọ bụla ọzọ. Kama nke ahụ, ị nwere ike mfe mbupụ iCloud kọntaktị na Outlook na enyemaka nke Wondershare TunesGo (Windows).
Ọ bụ a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ, na-eme ka ị na-exporting kọntaktsị na iCloud, Yahoo, Exchange na ndị ọzọ ndekọ a otu ma ọ bụ multiple vCard faịlụ (s), Outlook Express, Outlook 2003/2007/2010/2013, Windows Live Mail na Windows Address Book. Ugbu a, ibudata ngwá ọrụ a ịkwaga kọntaktị site na iCloud ka Outlook.
Cheta na: Iji nyefee iCould kọntaktị na Outlook na TunesGo, ị kwesịrị ị mbụ banye na iCloud akaụntụ na gị iPhone mbụ. Ndị ọhụrụ iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s / 5c, iPhone 5, iPhone 4, iPhone 4S na iPhone 3GS na-agba ọsọ iOS 9, iOS 8, ​​iOS 7, iOS 6 na iOS 5-n'ụzọ zuru ezu na-akwado site na nke a ngwá ọrụ.
Ụzọ dị mfe iji mbupụ kọntaktị site na iCloud ka Outlook
The nduzi n'okpuru na-agwa gị otú iji TunesGo mbupụ niile ma ọ bụ họrọ iCloud kọntaktị na Outlook mfe na conveniently. Ugbu a, ego ya.
Wụnye na-agba ọsọ TunesGo na PC gị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-esi na njikọ window nke TunesGo.
Nke mbụ niile, jikọọ gị iPhone na kọmputa na eriri USB. Mgbe achọpụtara site TunesGo, gị iPhone-egosi na n'elu ke akpan window. Site na ịpị ọ bụla taabụ na ekpe sidebar, ị nwere ike ịlele data na gị iPhone.
Nzọụkwụ 2. Sign na iCloud kọntaktsị na gị iPhone
Na gị iPhone, enweta "Mwube". On mwube ihuenyo, enweta "iCloud". Mgbe ahụ, banye gị iCloud 's ọrụ na akaụntụ na koodu.
Nzọụkwụ 3. Nyefee kọntaktị site na iCloud ka Outlook
Na-ekpe sidebar, pịa "Ndi ana-akpo". Ndi ana-akpo Atiya, ị pụrụ ịhụ na kọntaktị echekwara na ebe nchekwa ekwentị, iCloud, Yahoo, Exchange, wdg Pịa iCloud ìgwè. All kọntaktsị na iCloud na-egosipụta na nri ebi ndụ.
Họrọ kọntaktị niile ma ọ bụ họrọ gị chọrọ kọntaktị. Mgbe ahụ, pịa "Import / Export". Na ndọpụta menu, họrọ "mbupụ niile Ndi ana-akpo" ma ọ bụ "Export kọntaktị ahọrọ". Na, na, họrọ "ka Outlook Express" ma ọ bụ "Outlook 2003/2007/2010/2013". Mgbe ahụ, TunesGo amalite idetuo kọntaktị site na iCloud ka Outlook. Dị nnọọ ịbụ n'aka gị iPhone jikọọ oge niile.
Mere! Ị ọma kpọfere iCloud kọntaktị na Outlook. Dị ka ị na-ahụ, ọ bụ ndị dị otú ahụ ihe dị mfe na-eme ka ya mgbe ị na-enyere ya aka site TunesGo. Ntak-agbalị a mma ngwá ọrụ iji nwere a na-agbalị na gị onwe gị?